Ileta Evela KwiQumrhu Elilawulayo | Ukholo Lokwenene
Kwinkupho yalo yokuqala ngqa, uhlelo lukawonkewonke lweMboniselo kaJanuwari 1, 2008 lwalunenqaku elitsha elikushiy’ ungawuval’ umlomo elithi “Xelisa Ukholo Lwabo.” Ukususela ngoko, kuye kwapapashwa inqaku elinalo mxholo rhoqo emva kweenyanga ezintathu, nto leyo esiye sayivuyela kakhulu!
Baye basabela njani abantu emva kokufunda la manqaku? Emva kokufunda inqaku elithetha ngoMarta, omnye umfundi wabhala wathi: “Ndahleka xa ndilifunda kuba ndifana nqwa naye—ndiyakuthand’ ukubuk’ iindwendwe nokuzixakekisa, kangangokuba ndide ndilibale ukuba kufuneka ndihlale phantsi ndincokole nabantu.” Emva kokufunda ibali likaEstere, omnye oselula wathi: “Ndifunde ukuba siyathanda ukuthi phithi ziimpahla nefashoni. Kubalulekile ukunxiba kakuhle; kodwa akufunekanga sizibaxe izinto.” Wongez’ esithi: “UYehova ujonga umntu esinguye ngaphakathi.” Elinye inqaku elalithetha ngoPetros labangela ukuba omnye udade ongumKristu azive sele ethe: “Eli nqaku linditsho andafuna ukulibeka phantsi. Ibingathi nam ndilapho! Neendawo ezingachazwanga ngokungqalileyo bendikwazi ukuba nomfanekiso-ngqondweni wazo!”
Aba bafundi—kunye nabanye abaye babhala bebulela ngala manqaku—bangqina ukunyanisa kwamazwi awabhalwa ngumpostile uPawulos kwakudala athi: “Zonke izinto ezabhalwa kwixesha langaphambili zabhalelwa ukuyalela thina.” (Roma 15:4) UYehova waqinisekisa ukuba la mabali ayabhalwa eBhayibhileni ukuze afundise thina. Sonke, kungakhathaliseki ukuba sineminyaka emingaphi sisazi inyaniso, sinokufunda lukhulu kuwo.
Sikukhuthaza ukuba xa uqalise ukuyifunda wakuba nje uyifumene le ncwadi. Yisebenzise kuNqulo Lwentsapho—abantwana baza kuyithanda. Xa ifundwa kwiSifundo SeBhayibhile Sebandla, qiniseka ukuba awuphoswa nayiveki le enye! Thatha ixesha lakho xa uyifunda, ungangxami. Zibone ngeliso lengqondo iindawo ekuthethwa ngazo. Yiba ngathi uyaziva iimvakalelo zabo kuthethwa ngabo, ubone nezinto abazibonayo. Thelekisa indlela abenza ngayo izinto nendlela obuya kuzenza ngayo wena.
Siyavuya uyifumene le ncwadi. Sinethemba lokuba iza kuba yintsikelelo kuwe nakwintsapho yakho. Sinithanda kakhulu yaye sininqwenelela impumelelo,
Xelisa Ukholo Lwabo—Ileta Evela KwiQumrhu Elilawulayo